दसैंमा घर आउनेहरूले फैलाउन सक्ने कोरोना जोखिम रोक्न कस्तो छ जिल्लाको तयारी? :: विवेक राई :: Setopati
दसैंमा घर आउनेहरूले फैलाउन सक्ने कोरोना जोखिम रोक्न कस्तो छ जिल्लाको तयारी?
सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै दसैंमा काठमाडौं उपत्यकामा रहेकाहरूलाई गाउँ नजान आग्रह गरिरहेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नियमित प्रेस ब्रिफिङमा पटक पटक जो जहाँ छ, त्यहीँ बसेर दसैं मनाउन अपिल गर्दै आएका छन्।
विज्ञहरूले समेत काठमाडौंमा संक्रमण व्यापक फैलिएको र दसैंमा उपत्यका बाहिरिने व्यक्तिले गाउँगाउँ कोरोना पुर्‍याउन सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
यस्तो अवस्थामा उपत्यकाबाट दसैंमा जिल्ला आउने व्यक्तिहरूबाट हुने जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न जिल्लाहरू अहिले तयरीमा जुटेका छन्।
कतिपय जिल्लाहरूले सरकारले यथास्थानमा रहेर दसैं मनाउन आग्रह गरेको कुरा राम्रो रहेको औंल्याएका छन्।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङ भन्छन्, ‘यसपालि काठमाडौंले सर्वसाधारणलाई त्यहीँ राखेर सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारले गरेको अनुरोधलाई नागरिकले पनि पालना गर्नुपर्छ। काठमाडौंबाट आउनेबाट गाउँमा संक्रमण फैलिने जोखिम छ।’
उनले काठमाडौंबाट आउनेबाट संक्रमण पुन फैलिने जोखिम रहेको बताए। उनले दसैंमा उपत्यकाबाट आउनेहरूको निगरानी गर्न तीन वटा संयन्त्रहरू तयार रहेपनि समस्या आउन सक्ने सुनाए। ‘जतिबेला पनि निगरानी गर्न सम्भव छैन। त्यसैले सरकारले जस्तै हामीले पनि जो जहाँ छ त्यहीँ बसेर चाडबाड मनाउन आग्रह गर्ने हो,’ उनले भने।
तर चाडबाडमा घर नै नाआउने कुरा त्यति व्यवहारिक नरहेको भन्दै सिडिओ तामाङले दसैंमा काठमाडौंबाट आउनेहरूले कडाइका साथ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने जोड दिए। उनले एउटा व्यक्तिको थोरै खेलाँचीले पनि संक्रमण व्यापक हुनसक्ने बताए।
काठमाडौंबाट मानिसहरू नआइदिएको अवस्थामा अहिलेको संक्रमणको अवस्थाबाट अझ राम्रो अवस्थामा पुग्ने उनको दाबी छ। पछिल्लो समय वीरगन्जमा दैनिक थपिने संक्रमितको दर एकल अंकमा झरेको छ। गत महिना दैनिक सयभन्दा बढी संक्रमित थपिएको अवस्थामा अहिले भने दैनिक औसत ५ जना संक्रमित भेटिएका छन्।
सिडिओ तामाङ भन्छन्, ‘काठमाडौंबाट सर्वसाधारण आइदिनुभएन भने आवतजवात नै हुँदैन। त्यो भएपछि त संक्रमण स्वतः नियन्त्रणमा आइहाल्छ नि।’
उनले दसैं र अन्य चाडबाडको बेला संक्रमण जोखिमलाई मध्यनजर गरेर कुनै पनि किसिमको ठूलो भिडभाड जमघट गर्ने कुरालाई निषेध गरिएको बताए। साथै खेलकुद गतिविधिहरू पनि नगर्न आग्रह गरिएको तामाङले बताए।
यस्तै काठमाडौंसँग धेरै आवतजावत हुने मोरङमा भने दसैंमा स्थानीयलाई यथासक्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर आफ्नै घरमा बसिदिन जोड गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तयारी छ।
अहिलेको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई रोकिरहन सम्भव नगरहेको भन्दै कार्यालयले व्यक्ति स्वयंलाई सतर्क रहन अपिल गर्ने कार्यालयले जनाएको छ।
‘हिजो पनि लकडाउन गर्यौं तर सधै रोकिरहन सम्भव पनि छैन,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरी निरौला भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवारी भनेको व्यक्ति स्वयंको हो। दोस्रो भनेको हामीले कम्तिमा घरमै बसिरहन उहाँहरूलाई आग्रह गर्ने हो।’
उनले दसैंमा काठमाडौंबाट आउनेहरूलाई कसरी व्यवस्थापन र नियमन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाए। मोरङमा अहिले पनि संक्रमण फैलिरहेकाले फेरि ‘स्प्रिड आउट’ हुनसक्ने प्रजिअ निरौला बताउँछन्।
उनले भारतबाट आउनेहरूका लागि भने अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए। साथै चाडबाडमा भिडभाड गरेर पूजा गर्ने र बली चढाउने काम पनि बन्द गर्न अनुरोध गरिएको उनले बताए।
पछिल्लो समय संक्रमणको जोखिममा रहेको सुर्खेतले भने सरकारको नीति अनुसार संक्रमण नियन्त्रणमा जुट्ने तयारी रहेको जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले सरकारले जसरी निर्णय गर्छ सोही अनुसार संक्रमण नियन्त्रणलाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्ने बताए।
‘सरकारले उपत्यकाबाट जिल्लावासीलाई आउन दिन्छ भने हामी त्यहीँ अनुसार प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न लाग्छौं,’ प्रजिअ रेग्मीले भने, ‘यदि सरकारले जो जहाँ छ त्यहीँ बसेर चाडपर्व मनाउने भन्ने नीति लिन्छ भने त्यो पनि राम्रै हुन्छ।’
उनले काठमाडौंबाट दसैंमा जिल्ला आउनेहरूको लागि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे स्थानीय तह लगायत सबै निकायसँग छलफल भइरहेको बताए। त्यसरी आएका मानिसलाई सकेसम्म घरमै आइसोलेसनमा बस्ने कुरा प्रभावकारी बनाउन जोड दिने तयारी रहेको उनले बताए।
‘पहिलो कुरा सरकारको निर्णयमा भर पर्छ। तर स्थानीय तह र वडास्तरमा सचेतना फैलाउने काम हुन्छ। अटेर गर्नेलाई त्यहीँ अनुसारको कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउनसक्छ,’ उनले भने।
सरकारले दसैं लगायत चाडबाडमा संक्रमण दर फेरि बढ्ने जोखिम औंल्याएको छ। यसपालिको दसैंमा सबै यथास्थानमा रहेर आशिर्वाद पनि फोन वा अनलाइबाटै लिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गर्दै आएको छ।
तर सरकारले यथास्थानमा रहेर चाडबाड मनाउन आग्रह गरिरहे पनि यो वर्ष दसैंमा उपत्यहकाबाट मानिस जिल्ला जान पाउने/नपाउने कुरा सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन। जसले गर्दा धेरैलाई अन्यौलता भएको छ।
यद्यपि काठमाडौं उपत्यकाबाट घर जानेहरूले संक्रमण भने आफूसँगै लैजाने जानकारहरूले समेत बताउँदै आएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत दसैंमा घर जानेहरूले कोरोना कोसेलीको रुपमा लैजान सक्ने भन्दै सतर्क रहन आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २१, २०७७, ०६:४६:००